Cleaner | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
This program is unique as it detects dangerous files that many other popular programs do not detect.
On main window click on button to scan your computer.
If new tasks are discovered click on button to clean your computer.
Active processes with full process path. Windows startup files. Services.
Discovered dangerous tasks from our database. RemoveIT Pro will automatically upgrade the core program and database.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, May 06, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Cleaner, Portable, Security
Android Phone နှင့် Tablet တွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ့် Application လေး ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းရဲ့ သွက်လက် မြန်ဆန်မှုကို စိတ်တိုင်း မကျ သူတွေ အတွက် မရှိမဖြစ် ဆောင် ထား သင့်တဲ့ Application လေး ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ မိမိ ဖုန်း RAM ပိုမို သွယ်လက် လာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် 1click Cache feature လည်း ပါဝင် လာတာကြောင့် ဖုန်းအတွက် အမှန် တကယ် အကျိုး ရှိစေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ် ..
အားရင် အားသလို တို့ထိ ပေးခြင်း အားဖြင့် မိမိဖုန်း Ram free ပိုရလာမှာ ဖြစ်ပြီးTheme Elector ကိုလည်း မိမိကြိုက်တဲ့ Design နဲ့ ဖုန်းပေါ်မှာ ထားရှိ အသုံးပြုနိုင်ကာ Widget မှာလည်း ထားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Boosting Level လေးမျိုး ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး လွယ်လွယ် ကူကူ အသုံးပြု လိုသူတွေ အတွက်တော့ noti မှာထားပြီး Click and Android Cleaner လုပ်ပေးနိုင် တာကြောင့် Android phone / Tablet ကိုင်ဆောင် သူတိုင်း မိမိဖုန်း တပ်ပလတ် တွေကိုသွက်လက် မြန်ဆန် လိုပါက လက်မလွှတ် သင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် ကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
Updated : April 26, 2015
အသုံးပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, April 29, 2015 No comments:
Power Clean 2.4.4 apk
Android ဖုန်း Tablet ကိုင်ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် အကောင်းဆုံး Power Clean လေး တစ်ခုကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်းလေး ကတော့ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် လက်ကလေးနဲ့ ထိလိုက်ရုံနဲ့ ဖုန်းကို ပေါ့ပါး သွားစေတဲ့ application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အနေနဲ့တော့ 100% လောက် clean ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ Green cleaner, including junk cleaner, memory booster, device optimizer, App manager, SMS, call, location, camera, and contacts တွေကို အကောင်းဆုံး အနေနဲ့ 100% လုပ်ဆောင် ပေးနိုင် ပါတယ်။
ဒီကောင်းလေး ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့1.95MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.3 အထက်ရှိ ဖုန်းများမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 20, 2015 No comments:
ဖုန်းကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါးစေမယ့် - 1Tap Cleaner Pro v2.56 apk
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင် သူများ အတွက် One Click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါး သွားစေမယ့် 1Tap Cleaner Pro Updated လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အကို အမ တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ အမြဲ ဆောင်ထား သင့်တဲ့ application လေး တစ်ခုပါ။
နောက်ပြီး ဖုန်းဂိမ်းတွေ ဆော့နေတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အဓိက ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်။ဒီ application လေးက ခလုတ်တစ် ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Cache, History နှင့် Call
/Text Log များ ကိုလည်း ရှင်းလင်းပေး နိုင်ပါတယ်။
Android ဖုန်း / Tablet ဖုန်းတွေမှာ ရှိထား သင့်တဲ့ application ကောင်းလေး တစ်ခုပေ့ါဗျာ။
ဒီကောင်လေးကတော့ ဖိုင်းဆိုဒ်2.7MBဖြစ်ပြီး ဖုန်း အားလုံးမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ ScreenShot တွေနဲ့ ပြပေး ထားပါတယ်။
လိုအပ်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူ လိုက်ပါနော်။
▼ mediafire.com ▼ OR ▼ zippyshare.com ▼
Acelogix System TuneUp v4.8.0.470 + Serial
Computer အတွက် Optimize လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ Software တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အထဲက Acelogix System TuneUp ကတော့ Optimize Tools အသစ် ကလေး တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ Feature တွေကို လိုက် ဖတ်ကြည့် လိုက်တော့ စိတ်ဝင်စား သွားတယ်ဗျ။ အဲ့ဒါနဲ့ သုံးကြည့် လိုက်တာ သဘောကျ တာနဲ့ ဆိုဒ်မှာ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ကတော့ Operation System တစ်ခုလုံးကို Optimize လုပ်ပေးနိုင်ပြီး PC အတွက် အသုံးတည့် စေမယ့် Tools ပေါင်း များစွာ ပါဝင်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။
အဓိက လုပ်ဆောင် ချက်ကတော့ PC ကို Clean လုပ်ပေး နိုင်တာပေါ့ဗျာ။ System မှာရှိနေတဲ့ Error များကို Fix လုပ်ပေးခြင်း အားဖြင့် ကွန်ပြူတာရဲ့ Speed ကို မြှင့်တင်ပေး ပါတယ်။ Window ရဲ့ Registry Error များကို လည်း Fix လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက် ပိုပြီး အသေးစိတ် သိချင်တယ် ဆို ရင် အောက် မှာ ဆက်လက်လေ့ လာနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Windows ® 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32 and 64-bit) အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ အမြဲတမ်း သုံးနိုင်အောင် Full Version အဖြစ် Serial Key ကို ထည့်ပေး လိုက်ပါ တယ်ဗျာ။
System TuneUp isamodified version of our product - "Ace Utilities" - withadifferent user interface. It'sacollection of tools to optimize your Windows PC's performance. It has two modes - 'Normal' and 'Expert' so both novice and experienced users can use it accordingly.
Features in System TuneUp
- Built-in steps ensure safer cleaning process.
- Correct shortcut errors in your Start Menu and desktop.
Fix errors in Windows Registry
- Remove invalid entries from Windows registry.
- Can easily reverse changes made to the registry.
- Can create System Restore Point before deleting entries.
- Windows boots up quickly.
- Reduces application crashes.
- Removes internet browser history and cache.
- Supports IE, Chrome, Firefox, Opera, Safari and many other browsers.
- Cleans Cookies and HTML5 data stored by all browsers and Flash.
- Cleans usage tracks kept by Windows like the media you play, files you open, programs your run etc.
- Erase the usage-history for over 300 third-party applications.
- You can create custom plug-ins to delete files of your choice.
- Supports multiple user accounts.
- Can 'analyse' your PC and inform you how many files you can delete and how much space can be recovered.
Secure your PC by making data recovery impossible
- Securely delete files and folders and make them unrecoverable.
- Wipe your disk free space and remove all traces of data that previously existed.
- Shred the contents of the Recycle Bin.
- Four efficient and customizable data wipe methods.
- Ensures that the deleted information does not fall in to prying eyes.
Eliminate duplicate files and folders
- Helps you locate true duplicates of your files and folders in your disk
- You can search based on file type, category or size range.
- Built-in support to check for duplicate music/video files.
- Can exclude important folders from scanning.
- Can ignore files below certain size to find space-consuming larger files.
Control the items that start with Windows
- Easily manage programs and services that start with Windows.
- Alerts you whenapreviously disabled program gets enabled.
- Prevent malicious programs from running at start-up.
- Your PC will boot up faster and use fewer resources.
Automate the clean-up process
- Run multiple tools in one go with 'Quick Cleanup'.
- Schedule cleanup to run at your convenience.
- Gives you detailed analysis of your disk or drive contents.
- Graphical pie chart representation; easy to understand.
- Shows space usage by files and folders; lists the top 100 files by size.
- Easy backup and restore of Windows Registry.
- Restore ability from Windows Recovery Console.
- Backup and restore from Command Prompt.
- Can save space by keeping the backup files in compressed format.
- Compacts and rebuilds Windows registry.
- Removes registry fragmentation.
- Manage Windows System Restore Points
- Easily manage system restore points by removing the ones you don't need.
- Uninstall applications easily and quickly.
Changes in v4.8.0 - Jan 13, 2015
- 'Erase Your History' default settings now includes option to clear the Chrome browser history.
- Fixed an issue in the Cookie Manager where user was not able to delete ALL cookies.
- Fixed an issue in the Cookie Manager where user was not able to uncheck some cookies like "google.com".
- Removed au32.exe file.
- Modified the cleaning process for Firefox to include session backups.
- Added progress indicator for 'Maintenance Wizard' and 'Erase Your History'.
- Updated history cleaning for Opera browser v26
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 13, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Cleaner, PC-TuneUp, SystemCare
တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါး စေမယ်-1Tap Cleaner Pro v2.55 Apk
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူများ အတွက် One Click နှိပ် လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါး သွားစေမယ် 1Tap Cleaner Pro Updated လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဂိမ်းတွေ ဆော့နေတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အဓိက ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်။ ဒီ application လေးက ခလုတ်တစ် ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Cache, History နှင့် Call
/Text Log များ ကိုလည်း ရှင်းလင်းပေး နိုင်ပါတယ်။
Android ဖုန်း / Tablet ဖုန်းတွေမှာ ရှိထား သင့်တဲ့ application ကောင်းလေး တစ်ခု ပေ့ါဗျာ။ ဒီကောင်လေး ကတော့ ဖိုင်းဆိုဒ် 2.8MB ဖြစ်ပြီး ဖုန်းအားလုံးမှာ သုံးနိုင် ပါတယ်။ အောက်မှာ ScreenShot တွေနဲ့ ရိုတ်ပြပေး ထားပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, April 03, 2015 No comments:
PC တစ်ခု လုံးကို Error ကင်းပြီး ပေါ့ပါး မြန်ဆန် သွားစေမယ့် - CCleaner (Professional Business Technician)
CCleaner ကိုတော့ လူတိုင်း သိပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ တိုင်းမှာ တကယ် ရှိနေသင့်တဲ့ Cleaner ဆော့ဝဲလ် ကောင်း တခုဖြစ် ပါတယ်။ မိမိ Window သုံးရတာ လေးနေရင် ဒီဆော့ဝဲလ် လေးနဲ့ Clean လုပ်ကြည့် လိုက်ပါ။ သိသိသာသာ ပေါ့သွား ပါလိမ့်မည်။
PC တင်မကပါဘူး Web Browser များကို လည်း CCleaner နဲ့ သန့်ရှင်း ပေးလိုက်ခြင်း အားဖြင့် Browser အသုံးပြု ရာမှာ ပေါ့ပါး သွားစေမှာ ဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
Software Uninstall နဲ့ Startup Manager တို့ ပါဝင် သောကြောင့် ဒီဆော့ဝဲ တခုထဲ မှာပဲ အားလုံး အဆင်ပြေ စေပါတယ်။ စက်ဖွင့် စမှာ Window က အရမ်း အတတ်နှေး နေတာတွေ ဆိုရင် Startup Mager ထဲဝင်ပြီး အသုံး မလိုတဲ့ Application တွေကို Disable လုပ်လိုက်ရင် သိသိ သာသာ မြန်လာပါ လိမ့်မယ်။
Full သုံးလို့ ရအောင် Crack File နဲ့ Serial Key ကိုပါ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ Professional & Business Edition လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်ရာကို ရွေးပြီး အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ Install နည်း ကတော့ ဒေါင်း ထားတဲ့ CCleaner v5.03.5128 ကို အင်စတော လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ဆော့ဝဲကို မဖွင့်ပါနဲ့။ Crack ရဲ့ Folder ထဲက Professional Business Technician ကြိုက် နှစ်သက်ရာ တခုကို ရွေးပြီး branding.dll ကို Copy ကူးပါ။
ပြီးရင်တော့ C ထဲက Program File ထဲက CCleaner ထဲကို သွားပြီး Paste လုပ်ပေး လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Full Version အဖြစ် အသုံးပြု နိုင် ပါပြီဗျာ။
နောက်ပြီး Keygen ကိုပါ ထည့်ပေး ထားပါသေး တယ်ဗျာ။ အသေးစိတ် ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Window XP , Vista ,7, 8 , 8.1 အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Windows Doctor 2.7.9.1 Portable
Deep Freeze ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ CCBoot v 3.0 2015 Full Version
CCBoot ဆိုတာ Deep Freeze လိုပဲ Hard Disk Partition ကို အုပ်တဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. CCBoot ကို တင်ပြီး ကိုယ် ပိတ်ချင် / အုပ်ထား ချင်တဲ့ Partition ကို ပိတ်ထားတဲ့ အခါ Reboot လုပ်တိုင်း CCBoot နဲ့ စပြီး ပိတ်စဉ် အခါက အတိုင်း ပြန်လည် ရောက်ရှိ သွားပါတယ်.. မတော်တဆ Virus ဝင်ခဲ့ ရင်တောင် Reboot ချ လိုက်တာနဲ့ နဂိုအနေ အထား အတိုင်း ပြန်လည် ရရှိပြီး CCBoot နဲ့ ပိတ်ပြိး နောက်ပိုင်း ဝင်ရောက် လာတဲ့ Virus တွေကို ဖယ်ရှား ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်..
အင်တာနက်ဆိုင်၊ ဂိမ်းဆိုင်လို နေရာမျိုးမှာ အသုံးများ ကြပါတယ်.. ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးချင်း အတွက် Client ကို ရွေးချယ်နိုင် ပြီး Network ချိတ်ဆက် ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ထိန်းချုပ် ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Server ကို ရွေးချယ်ပြီး Install လုပ်နိုင်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် v 3.0 2015 ကို ကီးနဲ့ တကွ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်..
CCBoot isapowerful network boot software that allows you to operated computer withoutalocal disk. By using CCBoot you will saves you disk space inavery easy and convenient way, control all computer inasingle click, and also restoreaclean system (clear of viruses and trojans) after each reboot. CCBoot will boot the system fromaremotely located machine using connected hard drive overanetwork and convergence of the rapidly emerging iSCSI protocol with PXE diskless boot technology. CCBoot also allows all client computers with different specifications use only one boot image which will reduce the workload for network administrators.
Run Setup And Choose your installation type
Now When you done configuration it will open up main window.
Done Its Registered !!!! Enjoy !!!!
ကဏ္ဍ Antivirus, Cleaner, Security
Advanced System Protector v2.1.1000.14996 + Serial
ဒီကောင်လေး ကတော့ မိမိ ကွန်ပြူတာ အတွက် Security ဆော့ဝဲလ် လေးပါ။ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးကို သုံးဖူး တဲ့သူ တိုင်း သိပြီး သားပါ။ မိမိတို့ရဲ့ PC မှာ Error တွေကို ရှင်းတဲ့ Software အဖြစ်လည်း သုံးနိုင် သလို Virus, Trojan, Adware, Key Loggers, Browser Hijackers, Malware တွေကို လည်း စောင့်ကြည့် စစ်ဆေး ရှင်းလင်း ဖယ်ရှား ပေးတဲ့ Software အဖြစ် လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Data Base Update လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် အသစ် ထွက်လာ သမျှ အဖျက် အမှောင့် Program တွေကို ဖယ်ရှား ရှင်းလင်း နိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။.ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝစွာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အသုံးပြု ရတာ အဆင် ပြေ စေဖို့ အတွက် Portable လေး အပြင် License Key လေး ကိုပါ ထည့်ပေး ထားပါ တယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, March 03, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Antivirus, Cleaner, PC-TuneUp, Security, SystemCare
CCleaner v1.08.32 apk
Android ဖုန်း တွေကို ပေါ့ပါး မြန်ဆန်အောင် အမိူက်တွေ ရှင်းလင်း သုတ်သင် ပေးနိူင်တဲ့
CCleaner Version: v1.08.32 apk update လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ် ။
ဒီကောင်လေး ကတော့ မိမိရဲ့ ဖုန်းမှာ ရှိသမျ junk ဖိုင်တွေ antivirus တွေကို ရှင်းထုတ်
ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် app manager တွေကို သန့်ရှင်းပေး နိုင်ကာ memory boost တွေ ကို
လည်း အကောင်းဆုံး မြှင့်တင် ပေးနိူင် တာကြောင့် လူကြိုက် များပြီး နာမည်ကြီး နေတဲ့
apk ကောင်းလေး ပါပဲ ။
ဖိ်ုင်ဆိုဒ်က 2.3MB ပဲ ရှိပြီး Android: 4.0 နှင့် အထက် ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ။
Requires AndroidAndroid 4.0.3 or higher
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ shared.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, February 28, 2015 No comments: